ပြင်ပြင်နေဆဲ ဘလော့ဂ် ဖြစ်တေအတွက် သီးညည်းခံပီးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် သာထွန်းအေးနည်းပညာမှတ်စု ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်ကတ်တေ ဘော်ဒါအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါရေ HOME
မင်္ဂလာပါ...သာထွန်းအေးနည်းပညာမှတ်စုမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်၊ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ... Pages
ဗုဒ္ဓမြတ်စွားဘုရားရှင်သည် လူသားအားလုံးကိုတူညီသော မေတ္တတရားထားတော်မူသည်
အလွမ်းငှက် ( ရဲရင့်)
REAL ARAKANESE POEM
VIDEOS OF DAHMA
သာထွန်းအေး နည်းပညာ ဘလော့ဂ်မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
ရခိုင်လုံးချင်းကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တေ "ကျောက်ခြုပ်ရိုးတိပြီနီရေမြို့"(ဝါသု) ကဗျာစာအုပ်ကို မလေးရှားမှာ ဖြန့်ချီလိုက်ပါဗျလ်၊ ကဗျာဝါသနာရှင်များ ရခိုင်အရွီးအသားနဲ့ အားပါးတရ ဖတ်နိုင်ကတ်နိုင်ပါဗျလ်
အင်တာနက်မျှသုံးမယ်Virtual Router Manager V0.9 Veta
အင်တာနက်မျှသုံးမယ်Virtual Router Manager V0.9
မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဝမ်းသာစရာ ပို့တစ်ခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Broadband
နဲ့သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကတစ်ဆင့် ဖုန်းကနေပြီး Wifi သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ Broadband တစ်ခုတည်းနဲ့ Wifi မျှသုံးလို့ရတာပေါ့နှော်….ကျွန်တော်သုံးတာ
2.5GB ပါ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကွန်ပျူတာရယ် ဖုန်းတစ်လုံးရယ် တစ်ပြိုင်တည်း သုံးတာတောင်
မဆိုးဘူးဗျ..ကျွန်တော်တို့လိုအကောင်တွေအတွက်တော့ ရှယ်ပဲဗျို့ ..ပြောနေရင်း လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး
အယင်ဆုံး အောက်ကလင့်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
စက်ထဲမှာ Antivirus လေးတွေကိုတော့ ပိတ်ထားလိုက်တာ
RUN ပြီးသွားပြီဆိုရင် Close ကိုနိပ်လိုက်ပါ
ဒီလိုလေးတက်လာပြီဆိုရင် Network Name(SSID) (ကိုထားချင်သည့်နာမည်)
Password: (ကိုထားချင်သည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်)
ဒါတွေထည့်ပြီး Start Vitual Router
ကို Start လုပ်ပြီး ကိုယ်သုံးစေချင်တဲ့ သူကို Password ပေးပြီးသုံးပေတော့……..။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။ ရေးသားသူ..သာထွန်းအေး
မကြည်စေခြင်းတဲ့ website တွေကို block ပေးတဲ့ Anti-Porn 18.1.9.17 Full Activation 10:27
မကြည်စေခြင်းတဲ့ website တွေကို block ပေးတဲ့ Anti-Porn 18.1.9.17 Full Activation ရေးသားသူ onekokoaung. ရေးသားသည်နေ့ Tuesday, September 18, 2012 အခု software လေးကိုအင်တာနက်ဆိုင်တွေ၊ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေမှအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်မှဖြစ်ပါတယ်။မိမိမသွားစေခြင်းတဲ့ website တွေကို block ထားလိုရင်ဖွင့်လိုမရတော့ပါဘူး။ အဓိက ကတော့ Porn website တွေကိုပိတ်ပေးထားပါတယ်
dropbox download linkSouce by: http://www.onekokoaung.co.cc Read More
Internet ကနေပြီး Mobile Phone များသို့ အလကား Message ပို့မယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ အားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးက ဘယ်လောက်တောင်အဆင်ပြေလည်းဆိုရင်Register လည်းလုပ်စရာမလိုဘူးဗျာ တစ်ခါတည်းတန်းပြီး နိုင်ငံရွေး ဖုန်းနံပါတ်ရေးပြီး Message ရိုက်ပြီးတာနဲ့ တန်းပို့ရုံးဘဲဗျာ။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိတာမနေ့ကမှ သိတာဗျ။ ကိုချစ် ပြောလို့သိတာကိုချစ်ကြီးဆီကိုလည်း ကျွန်တော်စမ်းပြီးပို့ကြည့်ပြီးသွားပြီဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီး ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုပို့လို့ရပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံများအချင်းချင်းလည်းပို့လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသာဘယ်
ကမှပို့လို့မရတာပါဗျာ။ဟဲဟဲဟဲ ဒါကလည်းမထူးဆန်းတော့ပါဘူးဘာလို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ ဒါတွေကလည်း မကြာခင်မှာအဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပို့ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ ရုရှား။ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့၊ USA ၊ ဂျပန် ၊ တရုပ် ၊ ကိုရီးယား လောကတော့ ပို့ကြည့်တာ အားလုံးအဆင်ပြေ ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ အသုံးပြုပုံကိုပုံလေးတွေနဲ့သေချာစွာရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
အောက်က Link လေးမှာ Message ပို့နိုင်ပါတယ်ဗျာ Free Mobile MessageSouce by . http://www.pyaephyo.com Read More
Viber ကို PC မှာ သုံးလို့ရပြီ အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် သုံးခွင့်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ Communication Software တစ်ခုကတော့ Viber ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖုန်းနဲ့ ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအချင်းချင်းကို အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိယုံဖြင့် ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆို အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အခုဆိုရင် ဖုန်းအချင်းချင်းသာခေါ်ဆို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Viber ကို PC နဲ့ပါ အသုံးပြုလာနိုင်ပါပြီ။Viber ကို PC to PC , PC to Phone , Phone to Phone , Phone to PC အမျိုးမျိုး အဆင်ပြေစွာနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိဖို့နဲ့ Viber Account ရှိဖို့ဘဲလိုပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျPC အတွက်ဆိုရင်တော့ တင်ထားတဲ့ window က အနိမ့်ဆုံးတော့ Window XP SP3 လောက်တော့ရှိထားသင့်ပါတယ်ဗျာ။ Window7, Vista အားလုံးရပါတယ်။ XP sp2 မရပါဘူး။ အသုံးပြုပုံကိုတော့အောက်မှာ ပုံနဲ့တကွသေချာစွာရှင်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာ ပျင်းလို့ တောသာလေးရှင်းပြထားတာကို ယူပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ PC အတွက် Software ကိုတော့ အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Download Here ပြီး၇င် Install ကို ကလစ်ပေးပါ---- အောက်က ပုံလေး အတိုင်း install လုပ်ပါလိမ့်မယ်-----
အားလုံးပြီး ပြီ ဆို၇င်တော့ အပေါ်က ပုံလေး အတိုင်း viber free call ခေါ်ဆိုလို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်-----
Source By ;http://www.pyaephyo.com
ဟိုနေ့က ကျွန်တော့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက် အကူအညီ တောင်းလို့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို တစ်ခြား မသိ့သေးတဲ့ သူတွေပါသိ့အောင်ဆိုပြီး Post ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီအစ်ကိုက သူ့ဖုန်းကို ဆိုင်မှာ မြန်မာ Fonts သွားထည့်တော့ ဆိုင်က ပြောတယ် ။ အစ်ကို့ဖုန်းက တစ်ခြားဖုန်းတွေလို မဟုတ်ဘူး။ root လုပ်ရတာလဲ မလွယ်ဘူး။ အရမ်းခက်တယ်တဲ့။ service ကြေး 13000 တောင်းတဲ့သူက တောင်း ၊ 15000 တောင်းတဲ့သူကတောင်းနဲ့ ။ ဘယ်ဆိုင်တွေလဲ ဆိုတာတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ အဲဒီအစ်ကို ကိုင်တဲ့ဖုန်းက Samsung Galaxy Y GT-S5360 ပါ။ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ အစ်ကိုဖုန်းကို စမ်းလုပ်ပေးရင်းနဲ့ တစ်ခြား မသိ့သေးတဲ့ သူတွေပါ အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ပုံတွေနဲ့ သေချာ ရှင်းမပြနိုင်တာတော့ နားလည်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။ Root ဆိုတာ ဘာလဲ .......... ?? Samsung Galaxy Y ကို Root လုပ်တာ ဒီလိုမျိုးပါဆိုပြီး ကျွန်တော်ချရေးသွားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ တစ်ခြား မသိ့သေးတဲ့သူတွေ ပါခဲ့ရင် ကျွန်တော် ဘာတွေ လျှောက်ရေးထားတာလဲလို့ ထင်သွားမှာပေါ့။ ပညာရပ်တစ်ခုက သူ့ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားကို နားလည်ထားမှ သာလျှင် ဆက်ပြီးလေ့လာလို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ သဘောတရားကို သေချာမသိ့ပဲနဲ့ ဟိုဟာလျှောက်ဖတ် ဒီဟာ လျှောက်ဖတ် လုပ်နေရင်တော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခင်ဗျား တိုင်ပတ်မှာ အသေအချာပဲ .... Root ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့။ မူလတန်း ကလေးတောင် သိ့ပါတယ် ။ အမြစ် ပေါ့ ။ အမြစ် ဆိုမှတော့ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ အသက် ၊ လေဒဏ် ၊ မိုးဒဏ် တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့။ နည်းပညာမှာတော့ ဒီ Root ဆိုတာ Linux Open Source Operation System ရဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။ Android ဆိုတာလဲ linux ကိုအခြေခံ ဖန်းတီး ပြုလုပ်ထားတာပါပဲ။ Root ဆိုတာက Linux မှာဆိုရင်တော့ System ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိရာ နေရာကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Android Phone တွေမှာဆိုရင်လဲ ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ လည်ပတ်တဲ့ စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ အဓိက နေရာ တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - Windows Xp/7စသည်ဖြင့် windows အသုံးပြု Computer တွေမှာဆိုရင်လဲ Windows ရှိနေတဲ့ (Eg: C:/ )နေရာမျိုးပေါ့။ အဲလောက်ဆို နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Android Phone တွေမှာ Root လုပ်ရတာလဲ ..... ?? Root ဆိုတာ ဘာလဲ ။ ဘယ်လို နေရာမျိုးလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲလို အဓိကကျတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာ ၊ တစ်ခုခု မှားလုပ်မိရင် System တစ်ခုလုံး သုံးမရအောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ကွယ်ဝှက်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူ user တွေ မတွေ့အောင် ၊ အသုံးပြုလို့ မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ရှင်းရှင်းလေးပါ .. ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ...... Root မလုပ်ပဲ Official သုံးနေလို့ရောမရဘူးလား။ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လေးသုံးချင်တယ်။ website တွေ ၊ Forun တွေ ၀င်ကြည့်ချင်တယ်။ Chatting ထိုင်ချင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်းမှာ မြန်မာလို အသုံးပြုချင်တယ်။ မြန်မာလို စာရိုက်ချင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ကိုယ့်ရဲ့ Android Version ကို Update လုပ်ချင်တယ်။ အသစ်အသစ် လေးတွေကို လူတိုင်းမက်မောတက်ကြတာပဲလေ။ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက ပါလာတဲ့ Application တွေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်တာတွေက များနေတယ်။ ဖြုတ်ချလို့လဲ မရဘူး။ နောက်တစ်ခါ Android Application တွေကလဲ အစုံပဲ။ ပေါလိုက်တာ ။ IPhone လိုပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်ထည့်စရာလဲ မလိုဘူး။ game တွေကလဲ အစုံပဲ။ စိတ်ကူးရှိတိုင်းထည့်နဲ့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Internal memory မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာမယ်။ အဲဒီအခါ ဖုန်းက လေးလာတယ်။ SD Card ထဲရွှေ့ထားချင်ပေမဲ့လည်း ရွှေ့လို့ မရဘူး။ နောက်ကိုယ့်ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို Backup လုပ်ထားချင်တယ်။ မတော်လို့ ဖုန်းကပျက်သွားရင် အထဲက မှတ်ထားတဲ့ Content တွေ ၊ Message တွေ စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲ။ ပျက်တာ သွားရင်တော့ ကြေကွဲပြီ။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေ အများကြီးကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်က တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ Root နေရာ ၊ သူတို့တွေ ဖျောက်ထားတဲ့ SuperUser ကို ကျွန်တော်တို့က လုယူကြရမှာပေါ့။ SuperUser ဆိုတာတစ်နည်းအားဖြင့် Windows မှာလိုဆိုရင်တော့ Administrator လိုမျိုးပါ။ Android OS တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ခွင့်ရှိတဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပေါ့။ အဲဒီလို System တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက်မွှေနှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Android ကို Root လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဆို ဘာကြောင့် Root လုပ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေထဲက မသိ့သေးတဲ့သူတွေအတွက် Root လုပ်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ အထင်ကရ Tools လေးတွေကို ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ - Z Root - Gingerbreak - Easy Root Tookit - Eric Root - CF Root - Super one Click - Revolutionary (HTC) - S2 Root (Samxung Galaxy) စသည်ဖြင့် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းမှာ မွှေနှောက်ပြီး ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Site တွေ၊ Forum တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါက မသိ့သေးတဲ့ သူတွေအတွက် ဗဟုသုအဖြစ် ရေးလိုက်တာပါ။ အဓိကကတော့ အခြေခံ သဘောတရားကို သေချာ နားလည်ဖို့ပါပဲ။ How to Root Samsung Galaxy Y GT-S5360 နိဒန်း ပျိုးနေတာနဲ့ ဒီ ဇတ်လမ်းလေးက အခုမှ ရောက်တယ်။ Samsung Galaxy Y ကို Root လုပ်တဲ့အခါ အပေါ်က Software တွေကို သုံးပြီး လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းမှာ ပါတဲ့ Recovery Mode ကိုအသုံးပြုပြီး Root လုပ်ပေးရမှာပါ။ Step 1 > ပထမဆုံး အောက်မှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Update.zip File ကို အရင် Download ဆွဲလိုက်ပါ။ File Size က 2.15 MB လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ Downloading From MediaFire Downloading From Sharebeast Downloading From Ziddu Step2> update.zip file ကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ SD-Card ထဲကို Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။ Copy ကူးပြီးပြီဆိုရင် SD-Card ကို ဖုန်းထဲကို ပြန်ထည့်ပြီး Power ပိတ်လိုက်ပါ။ Step3> တတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Recovery Mode ထဲကို ၀င်ရပါမယ်။ Recovery Mode ထဲကို ၀င်ဖို့အတွက် (Home Button + Volume up Button + Power Button ) ကို Seconds 20 လောက် ဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ Step4> Recovery Mode ကို ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ Volume up and down button ကို အသုံးပြုပြီး Update From SD Card ကို ရွှေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ Touch အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Volume button နှစ်ခုနဲ့ Home Button ကို အသုံးပြုရပါမယ်။ Step5> SD Card ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် အစောက Copy ကူးထားတဲ့ update.zip file ကို ရွှေးပေးပါ။ ပြီး၇င် home Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Step 6> Root စလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ကြည့်နေလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ Root လုပ်တာ ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ အိုကေသွားပါပြီ ။ ဖုန်းပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါ SuperUser စက်ရုပ်လေးရောက်နေပါ့လိမ့်မယ်။ ဒါဆို ခင်ဗျားဖုန်းကို စိတ်ကြိုက် ကလိလို့ ရသွားပါပြီ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ .... လေးစားစွာဖြင့် .... သူရ ဒါကတော့ Zawgyi Font နဲ့ Keyboard ထည်းနည်းပါ Facebook က အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ posts လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။ Android ဖုန်းတွေ ၊ Tablet တွေမှာ မြန်မာလို မြင်ရဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ မခက်ခဲပါဘူး။ အဓိက အရေးကြီးတာကတော့ မိမိရဲ့ Android ကို Roots လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Zawgyi Fonts ကိုထည့်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က Android System ကို လှည့်စားပြီးထည့်ပေး ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက System file တွေထဲကို ၀င်ပြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးရင်တော့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် အဆင့် (3) ဆင့်နဲ့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ Step (1) Installing of Root Explorer Step (2) Installing of Zawgyi Fonts Step (3) Installing of Frozen Keyboard Installing of Root Explorer ပထမဆုံး အနေနဲ့ Root Explorer ကို Install လုပ်ပါ့မယ်။ Root Explorer ဆိုတာလဲ File Mananger Application တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကို install လုပ်လဲ ဆိုတော့ Zawgyi Fonts သွင်းတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က android ရဲ့ system file ထဲကို ၀င်ပြီး ထည့်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီအတွက် Roots Explorer က ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အရင်ဆုံး အောက်မှာ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ File ကို Download ဆွဲလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ Myanmar Fonts For Android ဆိုပြီး Zip File ရလာပါမယ်။ Downloading From Mediafire Downloading From Ziddu Downloading From Sharebeast အဲဒီထဲကမှ အရင်ဆုံး Root Explorer ကို အရင်သွင်းပါမယ်။ Root Explorer ကို သွင်းဖို့အတွက် Phone ထဲက Unknown Source ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Setting > Application > Unknown Source အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားလိုက်ပါ။ Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ကယ်လို့ သတိပေးစာ ပေါ်ခဲ့၇င်လဲ OK သာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Download ဆွဲထားတဲ့ File ကို phone ရဲ့ SD Card ထဲကို ထည့်ထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲက File Manager ကိုဖွင့်ပါ။ ဒါကတော့ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံ ကွာခြားတက်ပါတယ်။ အဲဒီ File Manager ထဲကမှတစ်ဆင့် SD Card ထဲကို copy ထည့်ထားတဲ့ Root Explorer.apk ကိုရှာပါ။ တွေ့ပြီဆို၇င် အဲဒီ .apk file လေးကို နှိပ်ပြီး install ကိုနှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ Roots Explorer ကို install လုပ်လို့ ပြီးသွားပါပြီ။ Installing of Zawgyi Fonts Zawgyi Fonts Install လုပ်ဖို့အတွက် အစောက ထည့်ထားခဲ့တဲ့ Root Explorer ကိုဖွင့်ပါ။ software ကိုဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ Superuser Request ဆိုပြီး လာတောင်းခဲ့ရင် Allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Root Explorer ဖွင့်တာနဲ့ / ထဲကို ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက Roots လို့ ခေါ်ကြတဲ့ Directory ပါပဲဗျာ။ အဲဒီထဲကမှ မိမိရဲ့ SD Card ကိုရှာပါ။ SD Card ထဲကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် Download ဆွဲထားတဲ့ Folder ထဲမှာ Zawgyi Fonts ဆိုတာ ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲက DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ File ကိုရှာပါ။ DroidSans.ttf ကို တွေ့ပြီဆိုရင်3စက္ကန့်လောက်ဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ Option တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲကမှ Copy ကိုရွှေးပြီး copy ကူးပါ။ အောက်မှာ Paste နဲ့ Cancel ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ဘာမှ မနှိပ်မိပါစေနဲ့ ။ Phone ထဲက Back ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးပဲ / ကိုပြန်ရောက်အောင် ထွက်ခဲ့လိုက်ပါ။ / ထဲကို ရောက်ပြီဆိုရင် system Folder ကိုရှာပါ။ အဲဒီ system folder ထဲကမှ fonts ဆိုတဲ့ folder ထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။ အဲဒီ အချိန်ကျမှ paste ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Warning Box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ် ။ read only ဖြစ်နေလို့ copy ကူးလို့ မရဘူးလို့ ပြောတာပါ။ အပေါ်နားက permission နေရာမှာ Mount R/W ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။ Mount R/O ဆိုပြီး ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို Write လုပ်လို့ ရသွားပါပြီ ။ Paste ကို ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ။ တစ်ကယ်တော့ DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ နာမည်က Android Fonts ရဲ့ နာမည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က zawgyi fonts ကို android fonts နဲ့ အစားထိုးလှည့်စားလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီအတွက် Zawgyi fonts ဆိုတဲ့ နာမည်က DroidSans.ttf ဆိုပြီး ကျွန်တော် ပြောင်းထားလိုက်တာပါ။ စာဖတ်သူ ရှုပ်သွားမှာဆိုးလို့ ကျွန်တော် တစ်ခါတည်း ပြောင်းပြီး upload တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အခု paste လုပ်လိုက်တဲ့အခါ Warning box တစ်ခု ထပ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ Fonts က ရှိပြီးသားကြီး ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ Warning ပါ။ Overwrite လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Yes ကိုပဲ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံး အဆင့် တစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ overwrite လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်တဲ့ DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ Fonts ကို Permission ပေးရပါမယ်။ အဲဒီအတွက် DroidSans.ttf ပေါ်မှာ3စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်ပါ။ permission ကိုရွှေးပြီး အားလုံးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ok ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါပြီ .. အစောက ပြောင်းခဲ့တဲ့ Mount R/O ကို Mount R/W ဖြစ်သွားအောင် ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့လိုက်ပါ ။ မှားဖျက်မိတဲ့ အန္တရယ်က ကာကွယ်ပြီးသားရတာပေါ့ ။ အခုဆိုရင် Zawgyi fonts ကို Install လုပ်ပြီးပါပြီ။ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ message တွေ ၊ website တွေကို ကြည့်လို့ ရသွားပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့ စာရိုက်လို့ မရသေးဘူးဗျ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Keyboard မထည့်ရသေးဘူးလေ …. အခု ကျွန်တော် DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ File ကို အစားထိုးပြီး Zawgyi Fonts ထည့်နည်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် upload တင်ထားတဲ့ download Folder ထဲမှာက DroidSansFallback.ttf ဆိုတဲ့ fonts တစ်ခုလည်း ပါပါသေးတယ် ။ အကယ်၍ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ DroidSans.ttf ကို ထည့်လို့မှ မြန်မာလို မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် DroidSansFallback.ttf ကိုပါ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ နည်းအတိုင်း ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ DroidSans.ttf ကိုထည့်လို့ မြန်မာလို ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ ထပ်မထည့်ပါနဲ့ ။ Zawgyi Keyboard သွင်းနည်း Zawgyi Keyboard ထည့်သွင်းဖို့အတွက်လဲ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ထဲက FrozenKeyboard_1.1.3.apk ကို SD Card ထဲ ထည့်ပြီး Software ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ Install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ မိမိ Phone ထဲက Setting ထဲကို ၀င်ပါ။ အဲဒီထဲမှာမှ Frozen Keyboard ဆိုတာ နှစ်ခု ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုက Setting အတွက်ပါ။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့က Frozen Keyboard ကို ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Frozen keyboard Settings ဆိုတာ မပါတဲ့ကောင်ကိုပဲ အမှန်ခြစ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ သတိပေးတဲ့ message တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ OK ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာစာ keyboard က တစ်ကယ်အလုပ်မလုပ်ကို Message မှာ စမ်းရိုက်ကြည့်ပါ။ Message ပို့တဲ့နေရာကို သွားလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ မြန်မာလို ရိုက်ဖို့ မပေါ်သေးပါဘူး ။ စာရိုက်တဲ့ အကွက်ကလေးမှာ3စက္ကန့်လောက်ဖိထားပြီး Input Method ထဲကနေမှ Frozen Keyboard ကို ရှာပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ Keyboard ပုံစံ ပြောင်းသွားပါပြီ ။ အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာစာ ပြောင်းဖို့ အတွက်လဲ (ABC <> ကခ) ခလုတ်ကလေးနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ ချိန်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ အဲလောက်ဆို၇င်တော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စမ်းလို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ….. သေချာ အသေးစိတ် ရှင်းမပြနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ ခင်ဗျာ … အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ … လေးစားစွာဖြင့် သူရ Ref:http://www.tramyanmar.co.cc Ref:http://www.winkabarkyaw.co.cc
“အမျိုးသီလနှစ်ဌါနကို၊ ပြည့်ဝမဏ္ဍိုင်၊ စောင့်စွမ်းနိူင်သည်၊ ရခိုင်နာမ၊ ဘွဲ့မည်လှဖြင့် အန္တတ္တသညာခေါ်အပ်ရာတည်း"
Adobe In Design Cs5 Portable
anoterone : ညီလေးရေ adobe in design cs5 portable လေးရှိရင်မျှပေးပါ ဦးနော်.. မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့စောင့်နေမယ်... ပျော်ရ...
Viber ကို PC မှာ သုံးလို့ရပြီ အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် သုံးခွင့်ရပြီးနောက...
ရှိသမျှ Gmail Account အားလုံးကို Browser တစ်ခုတည်းမှာပဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်း Invisible နဲ့ဖွင့်ထားချင်ရင် ဒီ Post လေးက ကျွန်တော့် ဆရာသမား ဆရာ ...
2.45MB...ရှိပါတယ်..အသုံးပြုနည်းကတော့.... Tweak Wizard ကလစ်လုပ်ပြီး...ကိုယ်သုံးနေတဲ့နက်အမျိုးစားကို ရွှေပြီး..Next လုပ်သွားရုံပါ.....အဆင်ပြေပ...
ဗီဒီယို တည်းဖြတ် အခွေထုတ်ချင်သူ အတွက် Cyberlink Power Director - 8
နမူနာစမ်းသုံးကြည့်တာပါ အတော်လေးအဆင်ပြေတယ် မယူခင် ကြည့်ကြည့် လိုက်ပါ ဗီဒီယို တည်းဖြတ်တာ ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုကို ...
Copyright © သာထွန်းအေး(နည်းပညာမှတ်စု) | Powered by Blogger